Gabagabo: Xilligii Xisaab-xirka ee Sannadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabagabo: Xilligii Xisaab-xirka ee Sannadka
Uppdaterat måndag 2 maj 2011 kl 14.12
Publicerat torsdag 28 april 2011 kl 17.27
2-da maaajo ayaa ugu dambeeysa.
Maanta oo isniin ah bisha maajo-na tahay 2 ayaa ah maalintii ugu danbeeysey in dib looga jawaabo ama loogu celiya hayadda cashuuraha xisaab xirkii sannadkii tagay ee 2010, iyadoona uu goolka hayaddu leedahay yahay in saddex-daloolow laba tiro u dhiganta 4,8 malyuun ee ruux jawaabtooda ey ku bixiyaan habka aaladda elektrooniga. Iyada oo la kaashanayo telefoonnada badhammada leh, Internet-ka, in lagu jawaabo qoraalka SMS ee telefoonnada gacanta lagu qaato mobail-ka.
Waxaa sidoo kale sannadka suurtagal ah in lagu xisaab-xir-celiyo telefoonnada xusuusta badan sida kuwa iPhon-ka loo yaqaanno.
Bulshada iswiidhen ayaa loo kala diray tiro foomam xisaab-xir ee sannadkii 2010 tiradooduna gaarsiisan tahay 7,4 malyuun, kuwaasina oo looga gol leeyahay in lagu caddeeyo dakhli iyo kharash wixii shakhsiga uu sheeganayo in dib loogu soo celiyo. Foomamka waraaqaha ee loo diray bulshada xeerka loogu leeyahay inay xisaab-xir soo sameeyaan ayey ku kaceen tiro geedad gaarsiisan 8 000 ee laga sameeyey waraaqaha xisaab-xirka. Waana mid ay hayadda cashuuruhu ku talo jirto in amuurtaa wax laga bedelo iyada oo laga fekereyo badbaadinta cimilada iyo dhaqaalaha ku baxa, iyo in kor loo qaado tirada dadyowga xisaab-xirka ku sameeya telefoonnada iyo aaladda Internet-ka. Illaa iyo hadda oo xilligii loo qabtay xisaab-xirka uu ka dhiman yahay toddobaad ayey hore jawaabtoodii xisaab-xir ugu gudbiyeen hayadda cashuuaha dadyoow tiradoodu gaarsiisan yihiin laba malyuun oo ruux.
Haddii aan qofka xisaab-xirkiisu ahayn mid sidaa u qalafsan waa ay sahlantahay sidii si sahal dib loogu soo celin lahaa. Waxaana loo baahan yahay oo keliya inaad hubiso farriimaha ku qoran ee dakhliga iyo qidmadda lagaa jaray iney isku dhigmaan, aadna u barbar-dhigto farriimmaha aad ka heshay goobihii aad ka howl-gashay, haddii ey jiraan kharash kugu baxay ee aad sheeganayso in dib laguugu soo celiyo. Waa howl ka sahlan, markii loo barbar-dhigo sidii ey xisaab-xir u sameeyn lahaayeeyn dadyoowga iyagu leh waraaqaha qiimaha saamiga iyo guryha gaarka loo leeyahay.
Haydda cashuuraha ayaa boggeeda internetka ku soo ban-dhigtay war-bixinno la xiriira habka xisaab-xirka oo ku qoran luuqado kala duwan < www.skatteverket.se >.
Sida caadia ah waxaa la buuxin karaa foomka xisaab-xirka ee la isku soo diro, kadibna aad boostada ku soo gudbiso. Haddii ey dhacdo inaad wax ka iloowday ama dooneeyso inaad dib wax uga bedesho waa mid suurtagal ah ayna sahlan tahay suurtagalkeedu, sida uu sheegaytommy Carlsson, ahna sarkaal ka howl-gala hayadda cashuuraha.
- Wax waa laga badali karaa, waana mid sahlan sidii wax looga bedeli lahaa, xitaa haddii aad horay u dirtay. Waxaad isbedelladaa aad ku sameeyn kar kartaa adiga oo waraaq ku soo qora oo hayadda u soo dira ama aaladaha Internet, telefoonnada iyo wixii la mid ah.
Ma wax jiraa haddaba in cidii ay lacagi u soo noqonayso, ee xisaab-irkeeda ku sameeysa aaladaha elektrooniga in si dhakhsiya ugu dambeeyn ciidda midsommar-ka loo soo celin doono.
- Haa, waa xaqiiq jirta weli. Waa abaal-marin yar oo dheeri ah ayaa la oran karaa in lacagta ruuxa u soo noqoneeysa uu horay u helo. Haddii aad jawaabta xisaab-xirkaaga ku soo gudbisay aaladda Internet-ka, ama telefoonka tusaale ahaan, islamarkaana aad noo soo qortay lambarka akawntigaaga, waxay dadkaasi lacagtooda heli doonaan horaanta bisha juun.